ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ်က ကျေးရွာများတွင် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေအတိုင်း အစိုးတာဝန်ရှိသူများ စစ်ဆေးနေပုံ
၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေအတိုင်း နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသူနဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မရှိသူတွေကို ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့ ပေါက်တောမြို့နယ်အတွင်းက ဆင်တမော်၊ ကြိမ်နီပြင်၊ ငှက်ချောင်း(ပုဏ္ဏားကြီး)၊ ဆည်သုံးတန်(ငဝက်ချောင်း)၊ ပြိုင်းတောင် စတဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု ၅ ခုမှာ လူအင်အား ၂၇၀ လောက်နဲ့ အဖွဲ့ ၁၅ ဖွဲ့ ခွဲပြီး တစ်ပြိုင်တည်း စစ်ဆေးနေတာလို့ ဆိုပါတယ်။
ပေါက်တောမြို့နယ်ကို စစ်ဆေးအပြီးမှာ နေပြည်တော်က ဝန်ထမ်းအင်အား ၁၅၀ ထပ်မံခေါ်ယူပြီး အဖွဲ့ပေါင်း ၄၅ ဖွဲ့နဲ့ စစ်တွေမြို့နယ်အတွင်းက ဒုက္ခသည် စခန်းတွေအပါအဝင် ကျေးရွာ အုပ်စုပေါင်း ၉ ခု၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းက ကျေးရွာအုပ်စု ၁၉ ခုကို ဆက်လက် စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
Simply think that we do not need those "Roheinger" people in our country at all. Get ride of them as soon as possible from our country or send them to the third country like Ausi, US, NZ or other countries. We are Buddish country. Asaresult of not getting ride of them, Muslim culture will be influence our country in future.
Nov 26, 2012 08:44 AM
Ba Ba Gye
Every one must have birth certificate and national identity certificate.It is the duty of government.If you have bad government in your nation you have to face so many problems.It is batter to change nationality if not change government.You can not change race but you can change your nationality.The problem is government not Rohenga,wa, kook ant.Are you agree?
Nov 22, 2012 07:13 AM
NOT AGREE ABOUT THIS INDIA MUSLIM PEOPLES , FUTURE WILL BE PROBLEM FOR WE ARE GENERATION .. PLEASE PLEASE
နေရပ်- bang kok
Nov 15, 2012 09:42 AM
Nov 11, 2012 09:52 AM